Kahoot ကို ဘာအတွက် သုံးတာလဲ။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Kahoot ကို ဘာအတွက် သုံးတာလဲ။
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | 03/06/2022 11:54 | အသုံးအဆောင်များ
Kahoot! ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူများကိုခွင့်ပြုသည့်အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပျော်သဘောဖြင့် သင်ကြားပြသနိုင်ခြင်း၊ အလွန်ကြွယ်ဝသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအတွေ့အကြုံကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းကို ကွန်ပျူတာများ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤကိရိယာ၏ အကောင်းဆုံးအချက်မှာ ကျောင်းသားများသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နည်းလမ်းဖြင့် သင်ယူကြပြီး မပျင်းဘဲ သင်ယူကြသောကြောင့် အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည့် သင်ကြားမှုနှင့် ပျော်ရွှင်စရာတို့ကို စုံလင်စွာ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Kahoot ဆိုပေမယ့်! ၎င်းကို ပညာရေးနယ်ပယ်အတွက် အဓိက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အလုပ်နှင့် စီးပွားရေးလောကအတွက်လည်း သင့်လျော်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆောင်းပါးတွင် Kahoot အကြောင်း နည်းနည်းပြောမယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
1 Kahoot ကို ဘာအတွက် သုံးတာလဲ။
2 Kahoot ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
3 Kahoot ကစားနည်း။
4 Kahoots ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ
Kahoot! ဖျော်ဖြေရေးဂိမ်းများမှတစ်ဆင့် မတူညီသောအကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဤဂိမ်းများသည် ပဟေဠိများ သို့မဟုတ် ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူပေါင်းများစွာအပေါ် ပညာရေးအဆင့်တွင် သြဇာကြီးမားသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆရာများအပြင်၊ ၎င်းသည် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် သင်ကြားလိုသော သို့မဟုတ် ပညာပေးလိုသော ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများအတွက် တန်းတူညီမျှ တရားဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Kahoot အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းပြောသောအခါတွင် မတူညီသော အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ပထမအဆင့်တွင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည် လျှောက်လွှာကို အသုံးပြုနိုင်ရန် စာရင်းသွင်းရမည်။ ဆရာ၊ ကျောင်းသား၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှု- ဖြစ်နိုင်သည့် ပရိုဖိုင်လေးခုထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသော အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့်မှာ ထိုကိရိယာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းမှလွဲ၍ အခြားအဆင့်မဟုတ်ပေ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ tool ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့် option တစ်ခုရှိသည်။ လူကို ဧည့်သည်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မတူညီသော အသေးအဖွဲ သို့မဟုတ် kahoots များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ပထမဆုံးအချက်မှာ ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် အက်ပ်လီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီး ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆရာမသည် ဂိမ်း၏ မတူညီသော စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်ရန် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဓိက ကတော့ ကွင်းလုံးကျွတ် ပြိုင်ပွဲ ဒါမှမဟုတ် အသင်းလိုက် ယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်မဖြစ်ကို ထူထောင်ဖို့ပါပဲ။ ဂိမ်းအမျိုးအစားကို ပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၊ ကိရိယာသည် ပင်နံပါတ်ကုဒ်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကစားသမားများသည် အခြားကွန်ပျူတာမှ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းကိရိယာမှ ဂိမ်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။
အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည်ဂိမ်းတွင်ပါဝင်နိုင်စေရန် PIN ကုဒ်ကိုရေးရန်လိုအပ်သည်။ ဂိမ်းစသောအခါတွင် ကြီးကြပ်သူသည် တာဝန်ခံသည်။ စခရင်ပေါ်ရှိ START ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် မေးခွန်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဖြေလေးခုကို ပြသပေးပါသည်။ ပါဝင်သူများသည် မှန်ကန်စွာဖြေဆိုပါက အမှတ်များရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဖြေမှန်ဆုံးပါဝင်သူသည် အနိုင်ရသည်။
Kahoot ၏ အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခု။ အကြောင်းအရာကို မည်သူမဆို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ကျန်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မျှဝေနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဆရာ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းကို ဖန်တီးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖန်တီးထားပြီးသားထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကိရိယာတွင် ဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သည့် Kahoots သို့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုရန် အသင့်ဖြစ်နိုင်သော ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခု ရှိသည်။ ပြဿနာမှာ စပိန်ဘာသာတွင် Kahoots အများအပြားရှိပြီး အနည်းငယ်သာရှိသည်။. အပလီကေးရှင်းတွင် ရှာဖွေမှုကို လိုချင်သောဘာသာစကားဖြင့် စစ်ထုတ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
Kahoot ကိုရွေးချယ်ရာတွင်၊ အခြားသူတစ်ဦးမှပြင်ဆင်ထားပြီး၊ ရွေးချယ်ပြီး PLAY ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Moderator သည် KAHOOT ကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုသည့် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ DUPLICATE ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Kahoot ကို လွတ်လပ်စွာ တည်းဖြတ်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသည်။
လောလောဆယ် Kahoot! စပိန်ဘာသာတွင် kahoots 500.000 နီးပါးရှိပြီး၊ ဒါကြောင့် သင်လိုချင်တာကို ရွေးတဲ့အခါ ပြဿနာရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အရည်အသွေးတူညီကြသည်မဟုတ်သည်မှာ မှန်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါတွင် သင်သည် စိတ်ရှည်ရပါမည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Kahoot tool သည် ဆရာများရော ကျောင်းသားများအတွက်ပါ ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒါဟာ ဖျော်ဖြေမှု နဲ့ ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်း နဲ့ သင်ယူနိုင် လို့ပါပဲ။. နည်းပညာအသစ်များသည် Kahoot ကဲ့သို့ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ကမ္ဘာ့နေရာအတော်များများတွင် နေ့စဉ်သင်ကြားရေးနှင့် ပညာရေး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » အသုံးအဆောင်များ » Kahoot ကို ဘာအတွက် သုံးတာလဲ။